This entry was posted on Saturday, September 20, 2008 and is filed under အမှတ်တရများ . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
မနောက်ပါနဲ.အေ.။ မယုံပါဘူး။ တို.သာဆိုရင် ဗိုက် ကို ပါ စမ်းသပ်မှာ…..
တော်သေးတာပေါ့ အင်္ကျီပဲ ချွတ်ခိုင်းလို့ :D
ဘာမပြော ညာမပြော တွယ်ထည့်လိုက်အုံးမယ်။
ဆေးထိုးအပ်ကြီးကြီးနဲ့ ထိုးမှာ ပြောတာပါ။
ဆေးပညာထုံးထမ်းစဉ်လာမှာ ခြေထောက်နာရင် ရင်ဘတ်နဲ့ ကျောကုံးကို စမ်းသပ်ရတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားလို့ ဖြစ်မှာပေါ့။ ခွီးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဟားဟား ..ကောင်းရောဗျာ ၊၊ လုပ်လိုက်ပုံကတော့ ..တစ်လွဲ ၊၊
တော်သေးတာပေါ့... ခြေထောက်နာတာ မမြင်မစမ်းသွားလို့ ၀င်တိုက်မိတာကြောင့်ဆိုပြီး မျက်စဉ်းခတ်ပေးလိုက်မှဖြင့်...
ခြေအိတ်ချွတ်ခိုင်းရင် နဲနဲနီးစပ်ဦးမယ်
သူ့ ပါသာတွေးချင်ရာလိုက်တွေးနေတာ..ကိုညာစုတ် အပ်ကြီးကြီးနဲ့ မှမထိုးလိုက်တာ ဒေါက်တာရယ်း)